Ukubhucungwa kwe-Erotique • Ukuhlikihlizwa komzimba ne-NuRu massage
Noma ngabe ufuna ukuvusa inkanuko yakho noma amazinga wesipiliyoni wenjabulo ejabulisayo nenjabulo engenamibandela, silapha ukukunikeza insizakalo enhle kakhulu yokuhlikihla. Zama ukusikisela okuvusa inkanuko okungenani kanye, futhi uzoyiqonda incazelo yayo emnandi empilweni yamadoda akho, futhi uzobuya kaninginingi. Ama-masseuse ethu anokuhlangenwe nakho okukhulu, afanelekayo futhi amangalisayo alungele ukuthokozisa ngisho neklayenti elifuna kakhulu kunazo zonke. massage eerotic salon noma uhlele ukuvakasha okungahambi kahle ehhotela lakho noma endaweni ohlala kuyo yangasese. Noma ngabe iyiphi inketho oyithandayo, sithembisa umuzwa wokuhlikihla inkanuko ongenakuqhathaniswa.
Onke amaMasseuse akhethelwe ngokukhethekile ithalente labo, ikhono, ubuhle bemvelo futhi bonke babusiswe ngokubukeka okuhle ngokumangazayo nangokwemvelo kokuthanda izinkanuko.
IZINHLELO ZE-MASSAGE - I-EROTIC MASSAGE
I-massage evusa inkanuko iyindlela enhle yokuthola amandla ezocansi, ukuphumula, kanye nenjabulo nothando. Ngenkathi wamukela ukubhucungwa kwakho, uzobe uzithumela kwelinye izwe lokuzijabulisa ngokuthinta okumnandi okuvela kumasseuse wakho emzimbeni wakho.
UMZIMBA WOKUPHAKATHI KOMZIMBA
Indlela yokubhucungwa umzimba nomzimba ekuqaleni ivela eThailand; exotic, engaqondakali futhi ehlala ijabulisa, ilethela wonke umuntu injabulo yangempela nokuphumula okukhanyayo futhi okunamandla.
Ukubhucungwa umzimba nomzimba akulona ilungelo labesilisa, omasisi bethu bangakulethela lokhu kujabula ngisho nakwabesifazane, ikakhulukazi uma nje le ndlela ivame ukusetshenziswa eThailand hhayi umkhuba.
I-Tantra imayelana nokuphumula komzimba nomphefumulo, futhi nokusetshenziswa kokuqonda kwamandla ezocansi.
Kukhombisa wena, ukuthi injabulo akuyona into yokudlala. Iningi labantu libona ucansi njengesidlo sakusihlwa noma ukudla okusheshayo - konke kufanele kusheshe futhi kusheshe, futhi ozakwethu bakuxazulule lokhu ngokuthi bazohlala isikhathi esingakanani nokuthi bazoshintsha izikhundla ezingakanani ngesikhathi esifushane.
Izidingo ze-01 lokhu kuyindlela yokwelashwa kwabantu abadala, ngakho-ke udinga okungenani iminyaka eyi-18 noma ngaphezulu ukubhuka ukubhucungwa kwethu. Ukuze wenze i-aphoyintimenti, ungaxoxa nge-inthanethi noma uthumele i-imeyili.02.HOTEL MASSAGEWSiphinde sinikeze ukubhucungwa okuvusa inkanuko ehhotela lakho.
Amanani ethu abandakanya ukuhamba, ngakho-ke ngeke kube khona okumangazayo lapho ukhokha. Le sevisi itholakala kuphela kumahhotela asedolobheni laseParis
futhi siphatha konke ukubhuka ngokuqonda.
Siyatholakala ngokuqokwa kusuka:
Kuzo zonke izinhlelo zethu zokuvusa inkanuko, sisebenza emazingeni amaningi. Ukusebenza emisipheni ukukhipha ukungezwani emzimbeni ukukwenza uzizwe ukhululekile nge-masseuse yakho, ukuze uqale isimo esivusa inkanuko. Ubumnandi nolwazi lomzimba ngokuthinta okuthambile futhi okubuthakathaka, umfutho uyakhula futhi uqhubekele ezingeni lezindawo ezinobungozi ngamaphuzu ahlukene okukhuthaza umuzwa womzimba nowangasese.
Ngalesi massage, uzokwandisa ulwazi lwakho ngezocansi futhi uthuthukise amakhono okubona kanye nokukhuthaza ngokomzimba nangokomoya. Futhi singakha isipiliyoni esimangazayo nesingokwemvelo ngasese egumbini lakho lehhotela noma ekhaya uma uthanda.
Isidumbu somzimba senziwa ngokuhamba nqunu ngokuphelele noma ngemasseuse enezintambo u-oyela oshisayo wehla emzimbeni wakhe.
Kusukela lapho kuya phambili, nigezwa ngumoya ovusa inkanuko ovumela ukusondelana okuphelele phakathi kwenu nobabili. Lo mqondo wokuhlikihla kufaka izindlela nezindlela ezahlukahlukene zokubhucungwa lapho izidumbu zabo bobabili abalingani zinqunu futhi zisondelene kakhulu.
Ngakho-ke, ukubhucungwa komzimba kuya emzimbeni kuyinkanuko enkulu, kumnandi, futhi akusizi kuwe kuphela kepha nakwabamasisi ngesikhathi esisodwa. Umphumela uba yinto engalibaleki ngokomzimba nangokubukeka
Ngesikhathi sokubhucungwa kweTantra, uzozwa ubumbano olumangazayo lomzimba wesifazane onethezekile. Intombazane izokuvusa izinzwa ngokuthintwa okuncane kwesifuba sakho, inqulu, isisu, izinqe. Iseli ngalinye lomzimba wakho lizolungiswa, njengoba ingxenye yokubhucungwa yenziwa yizindololwane namadolo ukuze kufinyelele esicongweni sokuphumula. I-massage ye-tantra ifana nohambo oluya kuwe, kuwo wonke umkhathi wakho wangaphakathi. Kuwo wonke lolo hambo, ukuthinta okunothando nokwazi kuzokusiza ukuxhumana nezingxenye nezici zakho, okuvame ukungatholi ukunakwa okuningi. Uzoxhumana nekhono lakho eligcwele, imvelo yakho, inkanuko yakho, injabulo yakho, kanye nekhono lakho lokujabula!
Ukujabulela ukunethezeka kwegumbi lakho lehhotela, sinikela ngenkonzo yethu yokubhucungwa kwehhotela. Omunye wabasizi bethu bazohlangana nawe lapho ukuze ujabulele ukubhucungwa kwezinkanuko ngaphandle kokuvakashela i-salon yethu.
Amanani ethu abandakanya ukuhamba, ngakho-ke ngeke kube khona okumangazayo lapho ukhokha. Le sevisi itholakala kuphela kumahhotela enkabeni yedolobha.
Ngezinhloso zokuphepha, uma uhlala ehhotela, kuzoshayelwa ucingo ngomusa oqondayo ngosuku lokubhuka ngqo egumbini lakho lehhotela.
Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi ukuqokwa kuyaqhubeka njengoba kuhlelwe futhi njengesiqinisekiso sephuzu lomhlangano.
Kujwayelekile impela ukuthi silandele le nqubo yobuchwepheshe, ezoqinisekisa ukuphepha kwabo bonke abathintekayo.
60 amaminithi - 200 EURO90 amaminithi - 250 EURO120 amaminithi - 300 EURO
60 amaminithi - 250 EURO90 amaminithi - 300 EURO120 amaminithi - 350 EURO
4 IBoulevard du Palais, 75001 eParis, eFrance